वीरेन्द्रनगरका सबै विपन्नलाई राहत दिनेछौं : का‍.वा. प्रमुख ढकाल – Yug Aahwan Daily
वीरेन्द्रनगरका सबै विपन्नलाई राहत दिनेछौं : का‍.वा. प्रमुख ढकाल
युग संवाददाता । २६ चैत्र २०७६, बुधबार १३:४२ मा प्रकाशित
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले नगरबासीलाई कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बचाउन पूर्वतयारीका कार्यक्रम तीव्र पारेको छ । कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गरी सरकारले देशभर लकडाउन गरेपछि वीरेन्द्रनगरले पनि नगर क्षेत्रमा लकडाउन कार्यान्वयन गरेको हो । कोरोनाको जोखिम न्यूनिकरणका लागि पूर्वतयारीमा जुटेको नगरपालिका गरिब तथा विपन्न परिवार र मजदुरहरुलाई राहत वितरण गर्ने प्रक्रियामा रहेको कार्यवहाक मेयर मोहनमाया ढकालले बताइन् । कोरोना संक्रमणबाट नागरिकलाई बचाउन भइरहेका प्रयास र लकडाउनले विकासमा पारेको असरबारे उनीसँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ, कुराकानीको साराशंः
नागरिकलाई कोरोनाको संक्रमणबाट बचाउन नगरपालिकाले के कस्तो पूर्वतयारी गरिरहेको छ ?
हिजोआज नगरपालिका अन्य काममा भन्दा कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनिकरणका लागि पूर्वतयारीका कार्यक्रममै केन्द्रित छ । जसअनुसार हामीले सचेतनाका लागि प्रचार प्रसारका कार्यक्रम गरिरहेका छौं । नगरकार्यपालिकाको सोमबार मात्रै बसेको बैठकले कोरोना संक्रमण, रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । जसका लागि नगरपालिकाको बाणिज्य बैंक सुर्खेत शाखामा रहेको प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा कारोबार गर्नेगरी दुई करोडको कोष पनि स्थापना गरेका छौं । सोही अनुसार हामी राहत र उद्दारका कार्यमा पनि अघि बढ्ने तयारीमा छौं । राहत वितरणलाई पनि एकद्धार प्रणालीमा लिने योजना छ ।
कोषमा हाल नगरस्तरीय ठुला चार वटा आयोजनाहरुबाट प्रति योजना ५० लाख कटौती गरी रकमान्तर गरिएको छ । भने थप रकम जुटाउनका लागि सहयोगी निकायसँग हातेमालो गर्ने अभियान जारी छ । यस्तै संघीय तथा प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायहरुमा प्रत्यक्ष समन्वय गरेर काम गरिरहेका छांै । दैनिक राहत विवरण, विदेशबाट आएका, होम क्वारेन्टाईनमा बसेकाको विवरण लगायतका प्रगति विवरण पठाउने गरिएको छ ।
नगरवासीले कत्तिको लकडाउन पालना गरेको पाउनुहुन्छ ?
सुरुमा हामीले कोरोना संक्रमणको त्रासले नगरक्षेत्रभित्र अत्यावश्यक खाद्य वस्तुबाहेक तरकारी र दुध जस्ता पदार्थहरु अन्य पालिकाबाट आयातमा रोक लगाएका छौं । वडा कार्यालयले व्यवस्थापन गर्ने गरी वडाहरु र टोल टोलमा लकडाउन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएका छौं । हाल नगरपालिकाको वडा नम्बर १ देखि १२ सम्मका विभिन्न स्थानहरुमा दमकलद्वारा डिस्ईन्फेक्ट छर्ने पनि कार्य जारी छ । दमकल तथा ट्याङ्कर नपुग्ने वडा तथा टोलहरुमा ट्याङ्कीद्वारा छर्कने कार्य पनि सुरु गरेका छौं । यसरी हामीले हाम्रो तर्फबाट लकडाउनलाई थप प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिरहेका छौं । भने नगरवासीले पनि लकडाउन कार्यान्वयनका लागि साथ दिएका छन् ।
कतिपय वडामा अझ नयाँ अभ्यास पनि भएको पाईन्छ । त्यसैले यस्तो महामारीको बेला सबैले आ–आफ्नो तवरबाट लकडाउन कार्यान्वयनमा जोड दिन सुझाव छ । कहिँकतै निर्देशन अटेर गरेर नागरिक घर बाहिर निस्कने, हिँड्ने पनि गरिरहेका छन् । उनीहरुलाई प्रहरीले सुझाव दिइरहेको छ । विशेषगरी गाउँतिर लकडाउनको उल्लंघन गरेर भेला हुँदै गफगाफ गर्ने गरेको पाईन्छ । कृपया सबै नागरिक तथा पाठक वर्गले यसो नगरिदिन अनुरोध गर्दछु ।
राहत तथा उद्दारमा खटिने कर्मचारीका लागि थप सुविधा केही छ ?
उद्दारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी पनि सुरक्षित हुन् भन्ने हाम्रो कामना हो । तर नगरपालिकाले कोरोना संक्रमण विरुद्धको व्यवस्थापनमा खटिने कुनै पनि पदाधिकारीलाई कोरोना संक्रमण भएमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नेछ । यदी कुनै कर्मचारीले ज्यान गुमाउनु परेमा आश्रित परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ नगरपालिकाले राहत तथा क्षतिपुर्ति दिने निर्णय भएको छ ।
यो बेला घरमा नभई कार्यालय वा फिल्डमा काम गर्ने कर्मचारीलाई दैनिक ६ देखि ८ सयसम्म थप भत्ता दिने व्यवस्था छ । भने प्रदेश सररकारले पनि थप प्रोत्साहन भत्ताको प्रबन्ध मिलाएको छ । त्यसैले यस्तो महामारीमा आफु पनि बाँच्न र अरुलाई पनि बचाउन जरुरी रहेकोले उद्दारमा खटिने कर्मचारीका लागि थप सुविधाको व्यवस्था गरिएको हो ।
राहत वितरणमा राजनीति गरियो भन्ने आरोप छ नी ?
त्यसो होइन । यस्तोबेला सबैले आ–आफ्नो तर्क अनुसारको बोल्छन् । जहाँसम्म नगरपालिकाले दिने राहतमा कुनै पनि अनियमितता नहोस् भनेर एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्ने तयारी छ । कुनै संघ संस्थाले सुटुक्क मनपरी राहत दिन पाउने छैनन् । लक्षित वर्गले राहत अवश्य पाउनेछन् । यसमा कुनै राजनीति गरिएको छैन, हुने पनि छैन । सरकारको मापदण्डअनुसार राहत वितरणका लागि हरेक वडामा पत्राचार गरिएको छ । वडाको पहलमा टोल विकास समितिले गरेको सिफारीसको आधारमा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी राहत माग गरेका छौं । यसरी प्रत्येकदिन संकलन भएको तथ्यांक प्रदेशको गृह मन्त्रालयमा पठाउने गरिएको छ । त्यसैले राहत वितरणमा अनियमितता र राजनीति हुन पाउने छैन ।
वीरेन्द्रनगरका स्थायी नगरवासीले मात्रै राहत पाउने हुन् ?
त्यसो होइन । वीरेन्द्रनगरका स्थायी तर विपन्न परिवारलाई नगरपालिकाकै कोषबाट राहत दिइनेछ । भने विभिन्न वडाहरुमा बसोबास गर्ने अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने अन्य जुनसुकै र जहाँका भए पनि मजदुरलाई प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा नगरपालिकाले नै राहत उपलब्ध गराउनेछ । जो लकडाउनको कारणले दैनिक कार्य गर्न नपाउने अवस्थामा रहेका छन् । त्यस्ता प िरवा र ल ा र्इ राहत दिने योजना हो । जसको ल ा िग अन्तिम तथ्यांक आउनेक्रम जारी छ । हालसम्म आएको तथ्यांक अनुसार भाडा तथा अस्थायी रुपमा बसेका वीरेन्द्रनगर बाहिरका मात्रै पाँचहजार दुईसय ५५ परिवार संख्या तथा २० हजार बढी व्यक्ति संख्याको तथ्यांक प्राप्त भएको छ । तथ्यांक बढ्न पनि सक्छ । त्यसैले सरदरमा करिव हजार ६ सय परिवारलाई खाद्यान्न (दाल, चामल, नुन र तेल) वितरण गर्ने तयारी छ ।
नगरपालिकामा रहेका क्वारेन्टाइन र स्वास्थ्यचौकीमा औषधि, उपकरणको व्यवस्था कस्तो छ ?
नगरका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा न्यूनतम् औषधि र पीपीइ उपकरण पठाईएको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्य र स्वास्थ्य संस्थाहरु हरेकदिन खुल्ने ब्यवस्था मिलाईएको छ । स्वास्थयकर्मीलाई तयारी अवस्थामै रहन निर्देशन गरेका छांै । उस्तै जोखिम अवस्था आए होम क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई घरमै गएर स्वास्थ्य चेकजाँच गर्ने व्यवस्था मिलाईएको छ । वीरेन्द्रनगरको अन्र्तनिर्भर, एकल महिला, जन माध्यामिक विद्यालयय र माध्यामिक विद्यालय नेवारेको भवनका कोठा क्वारेन्टाइनका लागि प्रयोग गरिरहेका छौं । यी भवनमा एकसय बेडको क्वारेन्टाइन छ । जहाँ अहिले पनि झण्डै ५० जना क्वारेन्टाइन बसेका छन् ।
लकडाउनका कारण विकासे तथा अन्य गतिविधिमा कस्तो असर परेको छ ?
लकडाउनका कारण नगरपालिकामा विकासे तथा अन्य गतिविधि ठप्प छन् । यसले गर्दा नगर विकासमा मात्रै नभई अर्थतन्त्रमा पनि असर परेको छ । विकासका लागि विनियोजित बजेट फ्रिज जाने सम्भावना छ । भने नागरिकको जिविकोपार्जनमा सकस भएको छ । त्यसैले लकडाउन नखुलेसम्म सबै विकासे तथा अन्य गतिविधि ठप्प हुनेछन् ।
यसबाट प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपमा सबैले घाटा बेहोर्नु परेको छ । अहिलेका लागि ठुला गौरवका आयोजनाबाट बजेट रकमान्तर गरी विपद्मा खर्च गर्ने तयारी छ । अब जहिलेसम्म लकडाउन खुल्दैन । तबसम्म अन्य सबै काम ठप्प नै हुनेछन् । अहिलेको मुख्य योजना र दायित्व भनेकै कोरोना भाइरसको महामारीबाट जोगिने र जोगाउने भएकाले विश्व नै यसको पूर्वतयारीमा लागेको अवस्थामा हामी उम्कन सक्दैनौं ।
‘दुर्गम कर्णालीलाई प्रविधिसँग जोड्नुपर्छ’
केन्द्रीय कमिटी बैठक कक्षबाट भीम रावल निस्किए